Sida loo sameeyo gradient midabka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Haddii aad rabto inaad waxbarto sida loo sameeyo gradient midabka sawirka, joog, qoraalkan waxaan ku sharixi doonaa sida loo sameeyo hab fudud.
Sida aad ogtahay, marka ay timaado tafatirka sawirka, waxaa jira fursado aan la tirin karin oo lagu gaari karo natiijooyin asal ah oo soo jiidanaya dareenka dadweynaha. mid ka mid ah Saamaynta, taas oo ku siin karta natiijadaas quruxda badan ee aan ka hadalnay, waa aaladda gradient-ka.
A gradient waa midowga midabo kala duwan oo leh midabyo isku mid ah. Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu dhejiyo noocyo kala duwan oo midab ah naqshadeynta. Waxaa lagu dari karaa si ay u siiyaan mugga qaababka, saamaynta iftiinka iyo hooska.
1 Noocyada ugu muhiimsan ee gradient
1.1 jaanis toosan
1.2 Wejiga shucaaca
1.3 Noocyada kale ee gradient
2 Sida talaabo talaabo loogu sameeyo muujiye
Noocyada ugu muhiimsan ee gradient
Sida aynu soo sheegnay, jilbadhku waa kan isku darka midabyo kala duwan oo leh midabyo isku mid ah. Laakiin ma jiro hal nooc oo gradient oo keliya, laakiin waxaa jira dhowr. Qalabka gradient ee Adobe Illustrator, waxa naloo soo bandhigay doorashooyin kala duwan oo lagu samayn karo.
Iyada oo la adeegsanayo ikhtiyaarkan jaanis toosan, midabada ayaa si tartiib tartiib ah ugu xiran. Iyada oo aad ku samayn karto gradient laga bilaabo barta bilowga ah ee dusha sare ilaa meesha ugu dambeysa ee xariiq toosan.
Noocan gradient ayaa ku jira qaab wareeg ah iyo bar bilowgeedu waa barta dhexe ee qaabkaTaasi waa meesha midabadu ka yimaadaan.
Noocyada kale ee gradient
Labada gradients ee aan hadda aragnay, toosan iyo radial, waa kuwa ugu badan. Laakiin waxaa jira noocyo kale oo gradient ah sida xagal qallafsanaan, jaanis muuqata, jaanis dheeman, ama qaab xor ah.
Jaangooyooyinka xagal, waxay ogolanaysaa gradient meesha midabada lagu xaaqo saacad ka soo horjeeda laga bilaabo barta bilowga. Mid kale oo ka mid ah gradients, waa gradient ka tarjumaysa, waxa lagu midabayn karaa iyadoo la adeegsanayo jaangooyooyin toosan oo labada dhinac ah, had iyo jeer laga bilaabo barta bilowga. Ugu dambeyntiina, gradient ee rhombus, waa kan kuu ogolaanaya inaad ku abuurto gradient qaabka joomatari ee rhombus, laga bilaabo barta bilawga ah ee lagu calaamadiyay gees ka mid ah, dibadda.
Gradients-yada waxaa lagu kaydiyaa maktabadaha, si aad u doorato mid iyaga ka mid ah waa inaad gujisaa liiska oo dooro maktabad xagga hoose ee liiska. Waxa kale oo jirta suurtogalnimada kaydinta iyo rarista maktabadaha gradient-ka ee aanu ka soo dejinay liiskan.
Sida talaabo talaabo loogu sameeyo muujiye
Lahaanshaha awoodda lagu ciyaaro heerarka kala duwan ee midabka waxay lagama maarmaan u tahay xirfadlayaasha adduunka naqshadeynta. Marka aan ogaano noocyada kala duwan ee gradients ee la samayn karo, waa in aan ku tababarno qalabkan si aan u helno natiijooyinka ugu macquulsan.
ka Tillaabooyinka ay tahay inaan raacno si aan u samayno jaanis midab leh Adobe Illustrator waa kuwan soo socda.
Tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa in la abuuro dukumeenti cusub. Haddii nooca Adobe Illustrator aadan ku arkin shaashad bilow ah oo ku siinaysa suurtogalnimada inaad abuurto fayl cusub, waxaanu aadi doonaa aaladda sare oo aan doorano tabka faylka, ka dibna ikhtiyaarka mar labaad, waxaanu hagaajin doonaa cabbirka. ee dukumentiga.
Waxaan aadi doonaa qalabka pop-up, kaas oo sida caadiga ah ka muuqda dhinaca bidix ee miiska shaqada, iyo waxaanu dooran doonaa qalabka qaababka joomatari waxaanu samayn doonaa qaabab kala duwan, xaaladdan oo kale labajibaaran yahay sharacayada.
Marka aan helno fagaarayaashayada, waxaanu samayn doonaa laba midab oo midab leh. Waxaan aadi doonaa xulashada swatches oo aan qeexno labada midab ee aan rabno mid kasta oo iyaga ka mid ah, kiiskeena midab huruud ah iyo midab buluug ah, laba midab oo aad u xoog badan si loo arko sida saameynta gradient u shaqeyso. Kadibna waxaan gujin doonaa batoonka aqbalida.
Mid ka mid ah talooyinka aan ku siinno waa in gradient lagu sameeyo midabyo jilicsan si loo siiyo dareen wada noolaansho.
Si loo dabaqo midabada qaababka aan abuurnay, Waxaan furi doonaa tab gradient oo dooran doonaa mid ka mid ah midabada la doortay oo waxaan u dejin doonaa si ay u buuxiyaan midabka. Talaabada xigta waa in lagu jiido muunada la sheegay mid ka mid ah gacan-qabeyaasha ka muuqda daaqada gradient-ka.
Waxaan dooran doonaa mid ka mid ah tirooyinkayada, waxaanan ku dabaqi doonaa gradient dusheeda toosan oo leh kan ugu horreeya ee muunadyadayada, kiiskan gradient ka buluug ilaa caddaan. Beddelka nooca gradient ee radial, waxaan arki karnaa sida uu u ekaan doono shaxkeena labaad.
Waxaan ku samayn karnaa tillaabadan midabka kale ee aan dooranay, anagoo isku daynayna labada nooc ee gradient. Ma aha lagama maarmaan in midabka labaad ee gradient our waa caddaan, waxay noqon kartaa midab kale iyo xataa qaso labada muunad ee aan doorannay.
Tallaabo dheeraad ah waxay noqon doontaa, ku dar seddexaad, afraad ama midabada aad rabto sanduuqa midabka ee ka muuqda daaqada gradient, sida aan ku aragno sawirka soo socda.
Si loogu daro habab badan, kaliya dhig cursorka hoostiisa sanduuqa halka ay ka muuqdaan dhawaaqyada waxaana ka soo bixi doona calaamad +, oo gujinta waxay keenaysaa maamule cusub.
Waa muhiim marka la samaynayo halabuur muuqaal ah, samee saameyn wanaagsan oo gradient ah, tan iyo tan, waxaad qabsan kartaa dareenka daawadayaasha.
Sidaa darteed, waxa ugu muhiimsan waa si xikmad leh u dooro midabada, sidaas darteed waa mid xiiso leh in la ogaado midabka midabka iyo midabada ugu wanaagsan ee isku-dhafka ah, maaddaama dhammaan midabada aysan shaqeynin marka la abuurayo gradients, dhammaantood ma abuuraan saameyn togan.
Midabada la dabaqay waa inay ahaadaan si habsami leh u milmaan, si natiijadu u noqoto mid fudud oo iswaafaqsan. Waxaa jira kiisas, kuwaas oo gradients ay aad u awood badan yihiin, oo isku dhafan midabyo aad u muuqda, oo leh ujeedo kaliya oo soo jiidashada dareenka dadweynaha. Noocyada noocaan ah ma aha kuwo aad u badan, taas oo ah, waa kiisas aan caadi ahayn.
Gradients-ku waxay raaci karaan sawir ama qoraal, markaa waxaa lama huraan ah in curiyayaashan aysan ka lumin halabuurka marka la isticmaalayo gradient, Taasi waa sababta aan kuu sheegayno in gradients waa inay noqdaan kuwo siman.
Talooyinkan, waxaan rajeyneynaa in lagugu dhiirigelinayo inaad abuurto halabuur adigoo isticmaalaya qalabka gradient-ka oo aad dhagaystayaashaada ugu soo jiidato midabyo gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida loo sameeyo gradient ee midabada